KUPARIDZA MAZUVA (ose mapasi rose neU.S.)
Processing time is 5-6 business days. Izvi zvinongova kuongororwa zvichienderana nehuwandu hwekugadzirisa nguva uye inogona kunge yakareba kana yakfupi kupfuura mazuva 5-6 anotaurwa. Kupera kwevhiki uye mazororo HAZUVA mazuva ebhizinesi.
Nubian Wig mutsara, kuvharwa, uye vhudzi rakakura inoda nguva yakawanda yekushanda, chero ipi zvayo pakati pe5-12 mazuva ebhizinesi nekuda kwekanguva inotora kuumba wigs, nekuvhara. Hatina huturu (kusununguka kubata / crochet) bvudzi riri muchitoro. Ndinokutendai nokuda kwokushivirira kwenyu!
Munguva yezororo uye kutengesa / kutumira zuvas kune inowanzo a 2-3 zuva rebhizimusi rakapera mukugadziriswa nemhaka yemari yakawanda yemirairo zvisinei izvi zvinogona kupfuurira kusvika pavhiki mukurumidza kunonoka.
Nhamba dzekutevera ichaiswa kune mirairo yose mushure mekubvumirwa kushandiswa kwenguva. Tichakutumira nhamba yako yekutengesa kuburikidza ne email kubva pa paypal.
Isu tinotumira mirairo yose kuburikidza neUnited States Postal Service (www.USPS.com) uchishandisa mail yePriority 2-3 mushure mekunge mutemo wako wapedza kushandiswa.
My Hair Hair Extensions HERE haisi mhosva kune chero kurasika kana kubiwa mapeji kamwe kutevera kwave kwakasimbiswa kununurwa. Hatitengi kubhadhara vatengi kune chero mapeji akave arasikirwa kana kubiwa nekuda kwezvisingatarisirwi izvo zviri kunze kweMutambo Wangu Wekutsvaga Chekuwedzera. Ndapota funga kuti uri kutumira kune imwe nzvimbo yakachengeteka. Mirairo yose ichauya nayo $ 50 inokosha ye inshuwarisi kana iwe uchida kuisa mari yakazara tapota tibvunze isu nemamerica nefoni yako yekuverenga mushure mekutenga.
mirairo ye $ 250 kana kuti mamwe achakwanisa kubhadhara pachena! Kusarudza kubhadhara kutengesa hakuzoiti kuti zviuye nokukurumidza.
Ndapota, isa chirairo pazuva richakupa nguva yakakwana kuti agamuchire kuraira kwako pamberi vhudzi rako rakagadzwa. Nguva yekugadzirisa haigone kuendeswa mberi kana kuratidzwa. Kunyange zvakadaro nguva yekuendesa inogona kuratidzirwa.
INTERNATIONAL SHIPMENTS (nyika dzose kunze kweUnited States)
Mirairo inotumirwa kuburikidza USPS (www.USPS.com) mushure mekubvumirwa kushandiswa kwenguva.
Kutumira kunogona kubva kune 25 $ - $ 65 yemitemo yenyika dzakawanda.
Chero mapepa asina kutorwa uye akadzorerwa kwatiri achabhadharwa kubhadhara kwekutengesa chete. Mariro yekutumira haigoni kuvimbiswa zvakare.
Zvichienderana nenyika yako purogiramu yako inogona kuve pasi pe mitero yemitero kana mari yekubhadhara paunosvika. Iyi mari yakawedzera haisi mari iyo MHEHE inopomerwa kana United inotaura. Ndapota chengetedza nharaunda yako yekodhi kuti uone kana mari iyi ichishanda kwauri. Kana zvakadaro iwe uchadiwa kubhadhara mari iyoyo kuti ugamuchire zvinhu zvako.
My Hair Hair Extensions HERE haisi mhosva kune chero kurasika kana kubiwa mapeji kamwe kutevera kwave kwakasimbiswa kununurwa. Hatitengi kubhadhara vatengi kune chero mapeji akave arasikirwa kana kubiwa nekuda kwezvisingatarisirwi izvo zviri kunze kweMutambo Wangu Wekutsvaga Chekuwedzera. Ndapota funga kuti uri kutumira kune imwe nzvimbo yakachengeteka. Mirairo yose ichauya nayo $ 100 inokosha ye inshuwarisi kana iwe uchida kuisa mari yakazara tapota tibvunze isu nemamerica nefoni yako yekuverenga mushure mekutenga.
June 20, 2017 pana 5: 03 pm
Icho chakakosha 5-6 zuva rebhizimisi rinomirira, kana zvichitora nguva yakawanda, ini ndingatora mari.
The MHEHE Staff
June 20, 2017 pana 10: 23 pm
Haisi mukana, Iko kuongororwa. Inogona kuva yakareba kana yakfupi kupfuura yevheji yekutengesa nguva. Zvisinei isu tinoita zvakanakisisa zvedu kuti tiwane mirairo yose munguva iyoyo. 🙂
May 8, 2018 pana 5: 53 pm
Mvere dzemazamu dzinotora zvakaenzana nguva yakareba kuti dziwane?
Uyezve, une vhudzi rakakura rekugadzira here? Ndinozviona pane nzvimbo yako yekuraira, zvichida ndaiverenga zvisina kururama asi ndakafunga kuti inoratidza kuti haiponi ... plz zano
May 8, 2018 pana 10: 35 pm
Mhoro. Kwete sampu inotakura inotengeswa muma 1 - 2 mazuva ebhizinesi.
July 16, 2018 pana 11: 10 pm
Saka chii chinofungidzirwa kushandiswa uye kutumirwa kwebvudzi rakakura rinoshandiswa kwekucheka nekugadzira?
December 27, 2018 pana 5: 55 pm
Izvo zvinoenderana nesangano redu rekuti. Kazhinji masvondo e1-2 kubva panguva yaunorayira kuti iendeswe pamba pako.